Fiidiyow muujinaya miyaa Xiaomi moobaylka mobile | Androidsis
Qolka Ignatius | | Xiaomi
Dagaalka lagu doonayo in lagu arko cidda soo saaraha ah ee soo saaraysa taleefan casri ah oo cabbirkiisu shaashaddiisu ka weyn tahay waxaad moodaa inay dhamaatay, inkasta oo aan wali dabada ka helno. Mustaqbalka adduunka taleefanka waxaa laga helaa shaashado isku laaban. Ku dhowaad laba bilood ka hor, Samsung waxay soo bandhigtay waxa noqon doona taleefankiisa casriga ah, oo qarinaya inta badan naqshadeeda sababo muuqda.
Evan Blass, waa khabiir caan ah, waxaan u wici karnaa sarkaalka ugu badan ee soo saarayaasha taleefannada casriga ah, wuxuu muuqaal ku daabacay bartiisa Twitter-ka, kaasoo uu ku sheegayo ma caddeyn karo inay sax tahay, laakiin inay tahay terminaal ay soo saartay shirkadda Xiaomi. Fiidiyowga waxaan ku aragnaa kiniin isku laaban oo noqda taleefan casri ah.
Lama hadli karo runnimada fiidiyowgaan ama aaladda, laakiin waxaa la sheegay inuu sameeyay Xiaomi, waa la ii sheegay. Telefoon cusub oo diirran, ama qalab qoto dheer oo miiq ah? pic.twitter.com/qwFogWiE2F
- Evan Blass (@evleaks) January 3, 2019
Maaha markii ugu horaysay mana noqon doonto kii ugu dambeeyay ee muuqaal noocan ah loo soo daabaco ugu dambeyntii noqo mid aan run ahayn. Ujeedada labada Samsung iyo Huawei ee ah inay soo saaraan taleefannada casriga ah ee laabma ayaa muddo dheer la ogaa, iyadoo shirkadda Kuuriya laga leeyahay ay tahay tii ugu horreysay ee soo bandhigta wax sidaan kor uga faallooday.
Xiaomi ayaa laga yaabaa inuu ka shaqeynayay arimahan in muddo ah sidoo kale, laakiin ugu yaraan maanaan maqal. Sida aan ku awoodno fiidiyowga, markii qalabku gebi ahaanba furan yahay, wuxuu ina tusayaa isku xirka kiniiniga. Laakiin markii la laalaabo, ma muujineyso isku xirnaanta taleefannada casriga ah.
Fikradda lafteedu ma xuma, laakiin haddii aan xisaabta ku darsanno in marka terminalku laabmo, dhinacyada shaashadda waxay ku ekaanayaan bannaanka, dhibic fudud oo ku dhacda ayaa burburin karta maalgashiga aan ku sameynay terminal-ka. The Model samsung, wuxuu na tusayaa shaashad gudaha ku laaban oo shaashad ku leh bannaanka, taas oo noo oggolaanaysa inaan la macaamilno aaladda sidii iyadoo casriga ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Xiaomi » Fiidiyow muujinaya muujinta moobilka Xiaomi
Shaashadaha rogrogmi kara ayaa aad uga adkaysi badan saamaynta.
Ku jawaab ker
Cimilada loo yaqaan 'Apex Weather' waa barnaamij kale oo dhanka cimilada ah, laakiin laga soo bilaabo barnaamijka caanka ah ee loo yaqaan 'launcher app'